नि: शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू | नि: शुल्क Instagram लाइक
अमेरिका / युके इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू खरीद गर्नुहोस्
दैनिक इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू किन्नुहोस्
ह्यासट्याग अनुसन्धान र प्रोफाइल अनुकूलन खरीद गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राम प्याकेज डील खरीद गर्नुहोस्
स्वचालित इन्स्टाग्राम लाइकहरू खरीद गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राम छाप र पहुँच खरीद गर्नुहोस्
IGTV दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस्
लक्षित र जैविक इन्स्टाग्राम ग्रोथ खरीद गर्नुहोस्
नि: शुल्क Instagram लाइक
प्रत्यक्ष ट्विच दर्शकहरु किन्नुहोस्
आज नि: शुल्क इन्स्टाग्राम फलोअरहरू र लाइकहरूको साथ द्रुत र लक्षित वृद्धि प्राप्त गर्नुहोस्!
हाम्रो सेवा प्रयोग गरी लक्षित, उच्च गुण, नि: शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू र नि: शुल्क इन्स्टाग्राम लाइकहरू! दैनिक वृद्धि प्राप्त गर्न जारी राख्न असीमित सक्रियताहरू। कुनै सर्वेक्षण छैन!
नि: शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू र मनपराउँनुहोस् or इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू किन्नुहोस्
हाम्रो निःशुल्क सेवा सक्रिय गर्न सरल चरणहरू
यो लक्ष्यित, उच्च गुणवत्ता, प्राप्त गर्न को लागी सरल छ। नि: शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू or नि: शुल्क इन्स्टाग्राम मनपर्दछ हाम्रो नेटवर्कबाट! प्रक्रियाले २ मिनेट मात्र लिन सक्दछ योजना सक्रिय गर्न र यहाँ निम्न चरणहरू छन्:
नि: शुल्क योजना सक्रिय गर्नुहोस्
चासोको प्रोफाइल अनुसरण गर्नुहोस्
~ २ मिनेट पछि, तपाइँ सक्नुभयो!
नि: शुल्क फ्यानहरू पाउनुहोस्!
अब तपाइँको नि: शुल्क खाता दर्ता गर्नुहोस्
योजना छनौट गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूको योजना
नि: शुल्क अनुयायीहरू
H 48 घण्टा सम्म चल्छ
२ 25 अनुयायीहरू प्राप्त गर्नुहोस्
१० लक्षित प्रोफाइलहरू पालना गर्नुहोस्
H 48 घण्टा भित्र छुट्छ
1x प्रत्येक 48 घण्टा सक्रिय गर्नुहोस्
वास्तविक अनुयायीहरू, कुनै बट्स छैन!
प्रोफाइल सार्वजनिक हुनुपर्दछ
सुरक्षित, सुरक्षित र निजी
15 दैनिक अनुयायीहरू ($20.00) 30 दैनिक अनुयायीहरू ($40.00) 60 दैनिक अनुयायीहरू ($80.00)
पाउनु 15 लक्षित अनुयायीहरू
हरेक H 24 घण्टामा छुटकारा दिन्छ
कुनै पनि समय रद्द गर्नुहोस्!
Instagram मनपराउने योजनाहरू
नि: शुल्क मनपर्नेहरू
१ पोष्टमा २० लाइकहरू प्राप्त गर्नुहोस्
० पोष्टहरू मनपर्‍यो
H 24 घण्टा भित्र छुट्छ
तपाई १x प्रत्येक 1 24 घण्टामा सक्रिय गर्नुहुन्छ
प्रति पोस्ट 25 लाइक ($20) प्रति पोस्ट 50 लाइक ($40) प्रति पोस्ट 100 लाइक ($80) प्रति पोस्ट 200 लाइक ($160) प्रति पोस्ट 500 लाइक ($350) प्रति पोस्ट 1000 लाइक ($700)
पाउनु 25 प्रति पोष्ट मन पर्छ
मिनेट भित्र छुटकारा दिन्छ
नयाँ पोष्टहरूमा स्वत: उद्धार गर्दछ
Re कारणहरू जुन तपाईले फ्रि इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूलाई प्राप्त गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ
इन्स्टाग्राममा नोटिस गर्नु तपाईंको व्यवसायलाई सघाउन मद्दत गर्न त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो गेम परिवर्तनकर्ताहरू हुन सक्छ। अनुयायीहरू र मनपराउनेहरू प्राप्त गर्नाले तपाईंको ब्रान्डको सचेतना फैलाउन र सम्भावित ग्राहकहरूमा पुग्न मद्दत गर्दछ। लोकप्रिय तस्विर साझेदारी साइटले १ अरब भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूसँग दैनिक asts०० मिलियन भन्दा बढी सक्रिय उपयोगकर्ताहरूसँग गर्व गर्दछ। कोही र सबैजना इन्स्टाग्राममा छन्, र त्यहाँ ती सबै व्यक्तिहरूसँग त्यहाँ साझेदारी र पोष्टहरू र चित्रहरूमा टिप्पणी गर्दै, तपाईं सोच्नुहुन्छ अनुयायीहरू प्राप्त गर्ने केकको एक टुक्रा हुनेछ। तर, जीवनका प्रायजसो चीजहरू जस्तै, राम्रोसँग स्थापित सामाजिक मिडिया उपस्थिति निर्माण गर्न धैर्य र दृढ संकल्प चाहिन्छ। विज्ञहरु पनि भन्छन् यो कडा परिश्रम हो। सोशल मिडिया ग्रोथ स्पेशलिस्ट, तालिया कोरेनका अनुसार, कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा स्वस्थ निम्नको निर्माण गर्नु ठूलो प्रतिबद्धता हो, र ती बहुमूल्य मनपर्दो र अनुयायीहरूलाई प्राप्त गर्न रणनीति, सीप र प्रशस्त समय लिन्छ।
श्री इंस्टा तपाईको नि: शुल्क समाधान हो
त्यहाँ बाहिर कम्पनीहरु छन् कि तपाइँको इन्स्टाग्राम उपस्थिति को विकास को दबाब को कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ, हामी जस्तै, श्री Insta! वास्तवमा, हामी हाम्रा ग्राहकहरु सित्तैमा इन्स्टाग्राम अनुयायीहरुलाई प्रदान गरेर मद्दत गर्दैछौं! यो सहि छ नि: शुल्क! यस्तो ठूलो सम्झौताको साथ तपाईं सोचिरहनुभएको हुन सक्छ, के समात्यो?
यो वास्तवमा धेरै सरल छ र तपाईंको समयको केही मिनेट मात्र लिन्छ। बस लगइन गर्नुहोस्, नि: शुल्क योजना सक्रिय गर्नुहोस् र तपाईंलाई पछ्याउनुहोस् इन्स्टाग्राम प्रोफाइलहरू प्रस्तुत गरिनेछ। यी इन्स्टाग्राम प्रोफाइलहरू तपाईंको रुचिहरूमा लक्षित हुनेछन् र तपाईंले पछ्याउन नचाहेको कुनै पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले प्रोफाइलहरूको आवश्यक संख्यालाई फलो गरेपछि, तपाईंको योजना सक्रिय हुनेछ। हामी इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूलाई तपाईंको खातामा 48 घण्टा भित्र डेलिभर गर्नेछौं, कुनै प्रश्न सोधिएको छैन। सबै भन्दा राम्रो, तपाइँ यो चरण हरेक 48 घण्टा दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब तपाईंले आफ्नो खाता सधैंभरि बढ्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ!
हामीसँग हाम्रा ग्राहकहरूको लागि विकल्पहरू पनि छन् नि: शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू। यदि तपाईंको खाता संलग्नता को आवश्यकता छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू खरीद गर्नुहोस्, लाइक, टिप्पणी, र अधिक। वा, हाम्रो मासिक सदस्यता योजनाहरू मध्ये एकमा सामेल हुनुहोस्। यी योजनाहरूले सान्दर्भिक अनुयायीहरूलाई डेलिभर गर्दछ वा तपाईंको प्रोफाइलमा प्रत्येक दिन मनपर्ने पोस्ट गर्दछ; सबै कम मासिक शुल्कको बदलामा।
के तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ कि सित्तैमा मद्दत लिनु वा पाउनु तपाईको लागि सही हो? यदि त्यसो हो भने, तपाइँको व्यवसाय र ब्रान्डको लागि धेरै अनुयायीहरू प्राप्त गर्नु उत्तम चाल हो किन शीर्ष7कारणहरूको लागि पढ्नुहोस्।
तपाईं आफ्नो कम्पनीको लागि वैधानिकता निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ
व्यवसायको लागि सामाजिक मिडियाको बढ्दो महत्त्वको साथ, खाता प्रदर्शन ग्राहकहरू तपाइँसँग व्यापार गर्न चाहन्छन् कि गर्दैनन् भन्ने निर्णय गर्ने कारक भएको छ। यदि तपाईंको व्यवसाय प्रोफाइलसँग धेरै संख्यामा अनुयायीहरू छन् भने, यो ग्राहकहरूसँग देखा पर्नेछ कि तपाईंको कम्पनी एक समय भएको थियो र थाहा छ यो के गरिरहेछ। केही अनुयायीहरू र कम सment्लग्नता भएको कम्पनीहरू अनुभवहीन देखिन्छ। परिणाम स्वरूप, ग्राहकहरु तपाइँको उत्पादन खरीद को बिरूद्ध निर्णय गर्न सक्छ। अतिरिक्त अनुयायीहरू पाउँदा तपाईंको प्रोफाईल बढि व्यावसायिक देखिन्छ र वास्तविक ग्राहकहरू पाउने सम्भावनालाई बढा दिन्छ।
तपाईं सोशल मिडियामा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईंको प्रोफाइलले एक लिफ्ट प्रयोग गर्न सक्दछ
यो दुखद सत्य हो कि धेरै जसो नयाँ इन्स्टाग्राम प्रोफाईलहरूले महत्त्वपूर्ण अनुयायीहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनु अघि ध्यान दिन गाह्रो हुन्छ। केही व्यवसायहरूमा, फेसन उद्योग जस्तै, मोडेलहरूलाई भाडामा लिइने छैन यदि तिनीहरूसँग निश्चित संख्यामा अनुयायीहरू छैनन् भने। कारण, धेरैजसो ब्रान्डहरूले त्यस प्रकारको कामको लागि आफ्नो क्षेत्रमा प्रख्यात व्यक्तिहरूलाई भाडामा लिन चाहन्छन्। पत्ता लगाउन प्रयास गर्दा यसले अप-र-आउने मोडेलहरूलाई चरम हानिमा राख्न सक्छ।
आशा छ कि तपाइँको उद्योग त्यो कडा छैन, यस मामला को तथ्य नयाँ व्यापार खाताहरु हो, र संघ द्वारा, नयाँ व्यवसायहरु, देख्न धेरै गाह्रो समय छ। यो थोरै ज्ञात चाल हो, तर धेरै कम्पनीहरूले पहिले नै इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू खरीद गरिसकेका छन्। त्यो सहि हो, रेस्टुरेन्टहरू, खेलाडीहरू, कपडाहरू ब्रान्डहरू, र यहाँसम्म कि राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना खाताहरूको लागि अनुयायीहरू किनेका छन् र आश्चर्यजनक परिणामहरू देखेका छन्। इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूमा तपाइँको मार्केटिङ बजेटको एक सानो भाग खर्च गरेर, तपाइँ इन्स्टाग्राममा पोष्ट प्रमोट गर्न भुक्तान गर्ने जस्तै धेरै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। भिन्नता के हो भने, तपाइँको पैसा धेरै टाढा जान्छ जब तपाइँ अनुयायीहरू खरीद गर्नुहुन्छ किनभने तपाइँ तपाइँले खरिद गरेको रकम प्राप्त गर्न निश्चित हुनुहुन्छ। जब तपाइँ पोस्ट बढाउनुहुन्छ, तपाईले गर्न सक्नुहुने सबै भन्दा राम्रो भनेको दुई सय अनुयायीहरू पुग्ने आशा हो, र परिणामहरू ग्यारेन्टी छैनन्।
तपाईं ठूलो ग्राहक दर्शकहरू द्वारा हेर्न चाहानुहुन्छ
धेरै अनुयायीहरू नभएको साथीको प्रोफाइल, वा धेरै संलग्नता नभएको पोस्टलाई तपाईंले न्याय गर्न सक्ने तरिकाको बारेमा सोच्नुहोस्। यो स्वीकार गर्न गाह्रो हुन सक्छ, तर अन्ततः, जब हामी यी पोष्टहरू देख्छौं हामी सबै एउटै कुरा सोच्दछौं; यो व्यक्ति अलोकप्रिय छ। यो विचार "सामाजिक प्रमाण" भनिने मानव व्यवहारको विशेषताबाट आउँछ। सामाजिक प्रमाणका अनुसार, हामी अरूले कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्, र उनीहरूलाई के मनपर्छ भन्ने आधारमा कसरी व्यवहार गर्ने र के मनपराउने भनेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। तपाइँ यसलाई हरेक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा कार्यमा देख्न सक्नुहुन्छ।
यसरी पोष्ट भाइरल हुन सक्छ। कसैले चाखलाग्दो पोस्ट देख्छ, त्यसैले उनीहरूले आफ्ना अनुयायीहरूसँग साझेदारी गर्छन्। तिनीहरूका फलोअरहरूले देख्छन् कि व्यक्तिले पोष्टको आनन्द उठाएको हुनुपर्छ किनभने तिनीहरूले यसलाई साझा गरे, त्यसैले तिनीहरूका अनुयायीहरूले पनि यसलाई साझा गर्न थाल्छन्। इन्स्टाग्रामले उच्च संलग्नता भएका र ठूलो संख्यामा फलोअरहरू भएका खाताहरूबाट पोस्टहरूलाई समर्थन गर्दछ। त्यसोभए तपाईंको पोस्टहरूले लाइक र टिप्पणीहरूको साथ कर्षण प्राप्त गर्दछ, यदि तपाईंको खातामा धेरै फलोअरहरू छन् भने, तपाईं खोजहरूमा उच्च र उच्च देखिनुहुनेछ। चाँडै सगाई हिउँ बल गर्न सुरु हुन्छ, र लामो समय भन्दा पहिले, ठूलो मात्रामा मानिसहरूले तपाईंको पोस्ट देखेका छन्। जब तपाइँ इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू किन्नुहुन्छ, तपाइँ भाइरल हुनको लागि पहिलो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ, र हजारौं, वा लाखौं ग्राहकहरूले पनि देख्नुहुनेछ।
तपाईं अन्य व्यवसायिक पहलमा अति व्यस्त हुनुहुन्छ
व्यवसाय प्रबन्ध गर्न धेरै मेहनत र ऊर्जा लिन्छ। अपरेसन सहज ढ operations्गले चल्नको लागि असंख्य कार्यहरू पूर्ण गर्नु आवश्यक छ, तर दिनमा मात्र धेरै घण्टा हुन्छन्। हामीले पहिले नै स्वस्थ इन्स्टाग्राम निर्माण गर्न लिने समयको बारेमा कुरा गरिसकेका छौं, र सम्भावनाहरू छन्, तपाईंसँग अन्यको पूरा लुन्ड्री सूची छ, सायद अझ महत्त्वपूर्ण, व्यवसायिक कार्यहरू पूरा गर्न आवश्यक छ। तपाईं आफ्नो प्रोफाइलको ख्याल राख्न एक सामाजिक मिडिया प्रबन्धक भाँडा लिन सक्छ, तर यसको मतलब उनीहरूको तलब र सुविधाहरूको लागि प्रति वर्ष $ 50,000 को बाहिर गोलीबारी हुनेछ। यदि तपाईं इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईं आफैंमा पैसा र स्रोतहरू बचत गर्नुहुन्छ यसले कसैलाई काममा लिन लिन्छ वा तपाईंको आफ्नै खातामा बढाउँदछ। यसले तपाईंको दिनमा बहुमूल्य समयलाई स्वतन्त्र बनाउँदछ, तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण कम्पनीका लक्ष्यहरूमा अझ राम्रो ध्यान दिनको लागि।
तपाईं अन्य सामाजिक मिडिया साइटहरूमा तपाईंको निम्न निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ
फेसबुकले २०१२ मा इन्स्टाग्राम पुन: खरिद गर्यो। जब दुई कम्पनीहरू मर्ज भए, प्लेटफर्मले तपाईंको इन्स्टाग्रामबाट फेसबुक, ट्विटर, र टम्बलरमा पोस्ट गर्न सम्भव बनायो! तपाईं आफ्नो सेटिंग्स परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ फेसबुकमा स्वचालित रूपमा पोष्ट गर्न प्रत्येक चोटि तपाईंले इन्स्टाग्राममा पोष्ट गर्नुभयो। फेसबुक र इन्स्टाग्रामले कत्ति नजिकबाट अपरेट गरेको कारण संभावना छ कि यदि तपाईं इन्स्टाग्राममा लोकप्रिय हुनुहुन्छ भने, तपाईंले फेसबुकमा लोकप्रियता प्राप्त गर्न धेरै समय लाग्दैन। इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू खरीद गर्दा तपाईंको लोकप्रियता बढ्छ र तपाईंलाई अन्य साइटहरूमा पनि लोकप्रिय हुने राम्रो मौका दिन्छ।
तपाईंलाई केहि सकारात्मक समीक्षाको आवश्यक पर्दछ
येल्प, गुगल व्यवसाय, र ट्रिप सल्लाहकार जस्ता समीक्षा साइटहरू अब त्यस्तो स्थान छैनन् जहाँ ग्राहकहरूले आफ्ना विचारहरू छोडिदिन सक्दछन्। धेरै अनुयायीहरूको साथ एक इन्स्टाग्राम खाता व्यवसायको यल्प प्रोफाइल जस्तै सकारात्मक समीक्षाको एक धेरै हो। जे भए पनि, तपाईंको पृष्ठ अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरूले तपाईंको सामग्री, र त्यसैले तपाईंको उत्पादनहरू, प्रत्येक दिन उनीहरूको समाचार फिडमा हेर्न साइन अप गरे। अनौठो हो, तिनीहरू तपाईंको व्यवसायको धेरै उच्च सोच्छन्! जब सम्भावित ग्राहकहरूले तपाईंको पोष्टहरूमा धेरै संख्यामा अनुयायीहरू र उच्च सment्लग्नता देख्दछन्, प्रभाव धेरै सकारात्मक समीक्षाहरू देखी उस्तै हो। अनुयायीहरू प्राप्त गर्नाले तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरू उपभोक्ताहरूमा उच्च-गुणहरू देखा पर्दछ र तपाईंको प्रतिस्पर्धाको बीचमा तपाईंको रेटिंग सुधार गर्ने तरिकाको रूपमा कार्य गर्दछ।
तपाईं अधिक पैसा बनाउन चाहानुहुन्छ!
सामाजिक मिडिया कुनै पनि मार्केटि strategy रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको छ। तपाईंले विभिन्न प्लेटफर्महरूमा प्रोफाइल सिर्जना गर्न समय लिएको कारण सरल छ, तपाईं आफ्नो व्यवसायको लागि नाफा बढाउन चाहनुहुन्छ। प्रत्येकको इन्स्टाग्रामको १ अरब प्रयोगकर्ताहरू एक सम्भावित ग्राहक हुन्। तर, इन्स्टाग्रामको एल्गोरिथ्मको कारण, ती ग्राहकहरूको एक अंशले पनि देख्न अत्यन्त गाह्रो हुन सक्छ। इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूलाई खरीद गर्दा तुरून्तै तपाईंको उत्पादहरू देख्ने व्यक्तिको संख्या बढ्नेछ। अधिक मानिसहरूले तपाईंको उत्पादनहरू देख्छन्, अधिक संभावना यो छ कि मानिसहरूले तपाईंको उत्पादनहरू किन्नेछन्, तपाईंको बिक्री बढाउँदै, र तपाईंको कम्पनीको तल्लो लाइनलाई मद्दत गर्नेछन्।
अझै सोच्दै हुनुहुन्छ कि नि: शुल्क सेवाहरू किन्नु वा पाउनु तपाईंको लागि सही हो?
प्रत्येक दिन धेरै व्यवसायहरू इन्स्टाग्राममा सामेल हुन्छन् आफ्ना उत्पादनहरू आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रचार गर्ने तरिकाको रूपमा। यसको मतलब, प्रतिस्पर्धा मात्र ठूलो हुँदै गइरहेको छ, र तपाइँको कम्पनीको आवाज सुनिएको सुनिश्चित गर्न गाह्रो छ। जब तपाइँ इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू किन्न छनौट गर्नुहुन्छ, तपाइँ तुरुन्तै तपाइँको व्यवसायको मार्केटिङ प्रयासहरू बढाउँदै हुनुहुन्छ, र तपाइँको ब्रान्डको लागि उपस्थिति स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो कार्यदिवसमा समय बचत गर्नुहुन्छ, आफ्ना दर्शकहरूसँग लोकप्रियता प्राप्त गर्नुहुन्छ, र अन्ततः, आफ्नो व्यवसायको लागि थप पैसा कमाउनुहुन्छ।
अनुयायीहरू किन्नु भनेको मार्केटिङको सबैभन्दा राम्रो राखिएको रहस्य हो र तपाईंको व्यवसायलाई सोशल मिडियामा चिनाउनको लागि एक बहुमूल्य र प्रभावकारी तरिका हो।
ठूलो दर्शकमा पुग्न र आफ्नो Instagram खाता बढाउन चाहनुहुन्छ? हामीबाट नि:शुल्क इन्स्टाग्राम फलोअरहरू पाउनुहोस्, श्री इन्स्टा, वा आज एक सगाई प्याकेज किन्नुहोस्!
के तपाइँसँग हाम्रो सेवा को लागी प्रश्नहरू छन्? यहाँ हाम्रो प्राय: सोधिने प्रश्नहरू छन्:
मलाई नि: शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू किन चाहिन्छ?
हामी सबैलाई थाहा छ कि धेरै इन्स्टाग्राम फ्यान हुनुले तपाईको इन्स्टाग्राम खातामा धेरै फाइदाहरू छन्। जब तपाईंसँग धेरै फ्यानहरू हुन्छन्, तपाईंले धेरै लाइकहरू, थप टिप्पणीहरू, र धेरै हेराइहरू प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। यसले वास्तवमै इन्स्टाग्राम प्रयोग गरेर बाँच्न वा एक्सपोजर प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नेहरूलाई मद्दत गर्दछ।
"नि:शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू" उद्योगमा नेता बनेको वर्षौं पछि, हामीले प्रयोगकर्ताहरूलाई हरेक दिन धेरै इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू प्राप्त गर्नको लागि १००% नि: शुल्क प्रणाली विकास गरेका छौं। तिनीहरू उच्च गुणस्तर र तपाईंको रुचिहरूमा लक्षित छन्। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको केहि इन्स्टाग्राम खाताहरूसँग जडान गर्नु हो जुन तपाईलाई अपील गर्दछ!
श्री इन्स्टा प्रयोग गर्न यो सजिलो निर्णय हो। तपाईंले कुनै पनि सर्वेक्षणहरू भर्नु वा व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक छैन। सबै भन्दा राम्रो, तपाईं हाम्रो नि: शुल्क सेवा असीमित पटक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ! यसको मतलब तपाईंले हरेक दिन थप प्रशंसकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जबसम्म तपाईं बढ्दै जान चाहनुहुन्छ।
के यो तपाईको नि: शुल्क सेवा प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
यो धेरै स्पष्ट गरिएको छ कि प्रयोगकर्ताहरू जसले आफ्नो इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड तेस्रो पार्टी साइटहरू / अनुप्रयोगहरूसँग साझा गर्छन् उनीहरूको खातालाई जोखिममा राख्न सक्छन्। यस अनुसार इन्स्टाग्राम,
"यदि तपाइँ यी एपहरूलाई तपाइँको लगइन जानकारी दिनुहुन्छ, चाहे पहुँच टोकनको साथ वा तपाइँको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड दिएर, तिनीहरूले तपाइँको खातामा पूर्ण पहुँच प्राप्त गर्न सक्छन्। तिनीहरूले तपाईंको व्यक्तिगत सन्देशहरू हेर्न, तपाईंका साथीहरूको बारेमा जानकारी फेला पार्न, र सम्भावित रूपमा तपाईंको प्रोफाइलमा स्प्याम वा अन्य हानिकारक सामग्री पोस्ट गर्न सक्छन्। यसले तपाइँको सुरक्षा र तपाइँका साथीहरूको सुरक्षालाई जोखिममा राख्छ।"
तपाईंले आफ्नो नि: शुल्क खाता सिर्जना गर्दा याद गर्नुहुनेछ, हामीलाई तपाईंको इन्स्टाग्राम प्रोफाइलमा कुनै पहुँच आवश्यक पर्दैन। हामी तपाईको पासवर्डको लागि कहिल्यै सोध्दैनौं र तपाईलाई यो नदिनुहोस् भनेर सिफारिस गर्दैनौं, कहिल्यै! हामी तपाईंलाई आफ्नो Instagram प्रयोगकर्ता नाम प्रदान गर्न आवश्यक छ। यो आवश्यक छ ताकि हामी जान्दछौं कि कुन खातामा प्रशंसकहरू पठाउने।
श्री इन्स्टाले 2013 देखि नि:शुल्क फलोअरहरू प्रदान गर्दै आएको छ। वास्तवमा, हामी यी सेवाहरू प्रदान गर्ने अग्रगामी हौं। तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि धेरै सेवाहरूले नि: शुल्क अनुयायीहरू प्रस्ताव गर्ने दाबी पप अप गरेका छन्, तर प्रायः तपाईंको खाता जानकारी चाहिन्छ, वा तपाईंले केही चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा गर्न सक्नुहुन्छ जुन यसको लायक छैन। धेरै वर्षहरूमा, हामीले कहिल्यै इन्स्टाग्राम खाता प्रतिबन्धित गरेका छैनौं। हामी निरन्तर इन्स्टाग्रामद्वारा गरिएका अपडेटहरूको समीक्षा गर्छौं र तदनुसार हाम्रो डेलिभरी विधिहरू समायोजन गर्छौं।
के यी इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू वास्तविक छन्?
हामी वास्तवमा हाम्रा सशुल्क ग्राहकहरूलाई वास्तविक प्रशंसकहरू प्रदान गर्छौं, त्यहाँ 98% वेबसाइटहरूको विपरीत। धेरै अन्य वेबसाइटहरूले यो नि: शुल्क सेवा प्रस्ताव गर्ने दाबी गर्छन्, तर तिनीहरू गर्दैनन्!
हामी यो नि:शुल्क सेवा प्रदान गर्न सक्षम छौं किनकि हाम्रो follow4follow सेवा प्रयोग गरेर प्राप्त हुने प्रत्येक फ्यान तपाई जस्तै अर्को प्रयोगकर्ता हो।
हाम्रो सेवा एक समुदाय हो जसले समान विचार भएका मानिसहरूलाई एकअर्कालाई खोज्न र जडान गर्न अनुमति दिन्छ। हामी मध्यस्थकर्ता मात्र हौं।
वास्तविक अनुयायीहरू प्रदान गर्ने दाबी गर्ने साइटहरूबाट मूर्ख नहुनुहोस्। यो सँधै भनिएको छ कि यदि यो सत्य हुन धेरै राम्रो देखिन्छ, यो सम्भव छ ... र पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुन, हामीले याद गर्नुपर्छ कि अनुयायीहरूको गुणस्तर फरक हुनेछ। यो किनभने केही व्यक्तिहरूले आफ्नो खातामा अरूको तुलनामा धेरै प्रयासहरू मात्र राख्छन्। यो समग्र रूपमा Instagram को बारे मा भन्न को लागी समान छ। त्यसोभए, यदि एक मिनेटमा साँच्चै राम्रो ब्रान्डले तपाईंलाई पछ्याउँछ र अर्को मिनेटमा केही फोटोहरू भएको नियमित व्यक्तिले पछ्याउँछ भने चिन्ता नगर्नुहोस्।
तपाईलाई पठाइएका अनुयायीहरूको दायरालाई ध्यान नदिई, तिनीहरू तपाईले हाम्रो सेवाको लागि साइन अप गर्दा तपाईले चयन गर्नुभएको समान रुचिहरूमा चयन गरिन्छ।
म कसरी मेरो इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूलाई राख्न सक्छु?
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यो हाम्रो काम हो नयाँ व्यक्तिहरूलाई तपाईंको Instagram पृष्ठमा नि: शुल्क प्रदान गर्ने। तिनीहरूलाई त्यहाँ राख्नु तपाईंको काम हो। अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि यदि तपाईंको पृष्ठमा धेरै सामग्री छैन वा नियमित रूपमा नयाँ र आकर्षक सामग्री प्रदान गर्दैन भने तपाईंको संख्या घट्दैछ।
हामी समान रुचि भएका मानिसहरूलाई प्रदान गर्न सक्दो प्रयास गर्छौं। यसको मतलब यो हो कि तपाईको पृष्ठले नि:शुल्क वा सशुल्क योजना सक्रिय गर्नु अघि तपाईले चयन गर्नुभएको रुचिहरूको बारेमा सामग्री प्रदान गरिरहेको छ भनी तपाईले आफ्नो पृष्ठ कायम राख्न र बढाउने सम्भावना बढी हुन्छ। विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन् कि दिनको 1-3 पटक गुणस्तर सामग्री पोस्ट गर्दा उत्कृष्ट परिणामहरू आकर्षित हुने देखिन्छ। आफ्नो पोस्ट संग आफ्नो समय लिनु महत्त्वपूर्ण छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि फोटो/भिडियोहरू उच्च गुणस्तरका छन् र तपाईंको इन्स्टाग्रामको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छन्।
अन्तमा, तपाइँका दर्शकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न निश्चित हुनुहोस्। यदि तिनीहरूले तपाईंको पोस्टहरूमा टिप्पणी गर्छन् भने तिनीहरूलाई जवाफ दिन निश्चित हुनुहोस्। साथै तिनीहरूको पृष्ठ भ्रमण गर्ने र तिनीहरूलाई एक वा दुई लाईक दिने विचार गर्नुहोस्। यो बाटोमा जानेछ जब यो तपाईंको पृष्ठसँग दीर्घकालीन सम्बन्धहरू सिर्जना गर्ने कुरा आउँछ।
नि: शुल्क सेवाहरू प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ?
एकचोटि तपाईंले सफलतापूर्वक नि: शुल्क योजना सक्रिय गरिसकेपछि, तपाईंले सामान्यतया5मिनेट भित्र नयाँ व्यक्तिहरूले तपाईंको प्रोफाइल पछ्याउन थालेको देख्नुहुनेछ। तपाईंले वास्तविक र सक्रिय अनुयायीहरू प्राप्त गर्नुभएकोले, तिनीहरू सबै एकैचोटि आउँदैनन्। तपाईंको योजना अर्को 48 घण्टामा चल्ने हुँदा, तपाईंले योजनाको म्याद सकिनु अघि तिनीहरूलाई अनियमित रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। कुन बिन्दुमा, तपाईं फर्केर यसलाई फेरि सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ।
तिनीहरूलाई वास्तविक दीर्घकालीन र दिगो विकासको लागि जैविक र प्राकृतिक ढाँचामा डेलिभर गर्नाले तपाईंको Instagram खाताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ। इन्टरनेटमा कुनै अन्य सेवा छैन जसले उनीहरूको निःशुल्क सेवाहरूको डेलिभरीमा यति धेरै हेरचाह गर्छ। हामी साँच्चै हाम्रो समुदायको प्रत्येक सदस्यको ख्याल राख्छौं किनभने तपाईं बिना, यसले काम गर्दैन।
यो सेवा किन नि: शुल्क छ?
यो हामीले सधैं गरेको कुरा हो! हामी मानिसहरूको समूह हौं जसले सबैले प्रयोग गर्न सक्ने उत्कृष्ट उपकरणहरू ल्याउन मन पराउँछन्, चाहे तपाईं कोही हुनुहुन्छ वा संसारमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ अर्को सामाजिक मिडिया विकास साइट छैन जुन वास्तवमा यो भन्न सक्छ।
2013 मा सुरु भएदेखि, जब हामीले सुरु गर्यौं यो धेरै समय पछि थिएन जब अन्य सबै साइटहरूले हाम्रा सेवाहरू डुप्लिकेट गर्न थाले। तर, तिनीहरू धेरै तरिकामा कमजोर भए। तिनीहरू साँच्चै तिनीहरूको नि: शुल्क प्रयोगकर्ताहरूको बारेमा वास्ता गर्दैनन्। यो तिनीहरूको अनगिन्ती नकारात्मक समीक्षा अनलाइन पढेर देखाइएको छ।
त्यो हामी होइन! हामी जमीनबाट इन्स्टाग्राम प्रोफाइल प्राप्त गर्नुको महत्त्व बुझ्छौं। यो कडा परिश्रम हो र आजकल बाधाहरू तपाईं विरुद्ध स्ट्याक गरिएका छन्।
यसैले हामी सधैँ वास्तविक मूल्य प्रस्ताव गर्न कोसिस गर्नेछौं, चाहे तपाईले हामीबाट सेवा खरिद गर्नुभयो वा नगर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई निर्माण गर्न मद्दत गर्न चाहन्छौं र कसलाई थाहा छ, हुनसक्छ तपाईंले हाम्रा अन्य सेवाहरू मध्ये एउटा प्रयास गर्नुहुनेछ। यदि तपाइँ छैन भने, त्यो पनि ठीक छ! हामी तपाईंलाई प्रत्येक 48 घण्टामा दुई पटक सक्रिय गर्न दिएर यो प्रमाणित गर्छौं र यो सदाको लागि निःशुल्क छ!
म कसरी मेरो इन्स्टाग्राममा पैसा कमाउन सक्छु?
त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईं इन्स्टाग्राम प्रयोग गरेर आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक महान पृष्ठ संग सुरु हुन्छ। यो उत्कृष्ट पृष्ठमा उच्च गुणस्तरको सामग्री हुनुपर्दछ जुन विशिष्ट दर्शकहरूको लागि लक्षित छ। निस्सन्देह, यो Instagram मा पैसा बनाउन को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो।
अब, तपाइँ निम्न निर्माण सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा नि:शुल्क सेवाहरूले धेरै खाताहरूलाई थोरै प्रयासमा यो गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईंले खाता सिर्जना गर्दा तपाईंले चयन गर्नुभएको छनोटको आधारमा हामी लक्षित प्रयोगकर्ताहरूलाई डेलिभर गर्छौं। एकचोटि तपाईंले पर्याप्त फ्यान आधार निर्माण गरिसकेपछि, तपाईं व्यापार मालिकहरू/ब्रान्डहरू इत्यादिलाई तिनीहरूको उत्पादन वा सेवा शुल्कमा प्रदर्शन गर्नको लागि पुग्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ पनि वेबसाइटहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो Instagram खाताको लागि सही कम्पनीसँग जडान गर्न मद्दत गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। संसारभर धेरै मानिसहरूले यो गर्छन्।
के हुन्छ यदि मैले तपाईंलाई मेरो खाताको बारेमा सम्पर्क गर्न आवश्यक पर्दछ?
यो जहाँ हामी साँच्चै चम्किन्छौं! श्रीमान इन्स्टाले तपाईलाई २४-४८ घण्टा भित्र जवाफ दिनेछ ग्यारेन्टी! माग जति ठुलो वा सानो किन नहोस् । सामान्यतया तपाइँले 24 घण्टा भन्दा कममा प्रतिक्रिया पाउनुहुनेछ तर सुरक्षित पक्षमा रहनका लागि केही सिजनहरू अरू भन्दा व्यस्त हुने भएकाले हामी डेलिभर गर्न नसक्ने कुराको वाचा गर्न चाहँदैनौं।
हामीलाई विश्वास लाग्दैन? हामीलाई प्रयास गर्नुहोस् र हामीलाई सन्देश पठाउनुहोस्। यदि तपाईं केवल "नमस्ते" भन्न चाहनुहुन्छ भने र हामीलाई सेवामा तपाईंको विचारहरू थाहा दिनुहोस्। तपाईले सेवा देख्नुहुनेछ जुन नि: शुल्क इन्स्टाग्राम सेवाहरूको लागि इन्टरनेटमा सबै भन्दा राम्रो साइट प्रयोग गरी आउँछ।
13th मई 2022
खराब इन्स्टाग्राम प्रवृतिहरू तपाईंले 2022 मा पछ्याउनुहुन्न
जब तपाइँ विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लेटफर्मको बारेमा सोच्नुहुन्छ, दिमागमा आउने पहिलो नाम इन्स्टाग्राम हो। Statista रिपोर्ट अनुसार, प्लेटफर्मले 1.4 बिलियन भन्दा बढी कमाएको छ ...
4th मई 2022
तपाईंले इन्स्टाग्राममा कतिवटा ट्यागहरू प्रयोग गर्नुपर्छ?
20th अप्रिल 2022
तपाईंको इन्स्टाग्राम पोस्टहरूमा स्प्यामरहरूलाई टिप्पणी गर्न रोक्नको लागि सुझाव र युक्तिहरू
हामी अधिक इंस्टाग्राम मार्केटिंग सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछौं
Instagram सेवाहरू ट्विटर सेवाहरू ट्विच सेवाहरु Pinterest सेवाहरू YouTube सेवाहरू स्पेटिफ सेवाहरू SoundCloud Services
ह्याशट्याग अनुसन्धान अनुयायी रुचि IGTV मनपर्‍यो रिल दृश्य प्रभाव र पहुँच IGTV दृश्य टिप्पणी
अनुयायी च्यानल दृश्यहरू
नाटकहरु प्लेलिस्ट अनुयायीहरू अनुयायी
नाटकहरु डाउनलोड अनुयायी रुचि टिप्पणी रिपोस्टहरू
सदस्यहरू दृश्य रुचि टिप्पणी घण्टा हेर्नुहोस् साझा
हाम्रो पार्टनर साइटमा किन्नुहोस्
यहाँ मिस्टर इन्स्टामा, हामी असाधारण सेवा र किफायती मूल्यहरूमा गर्व गर्छौं। यसको लागि हाम्रो शब्द मात्र नलिनुहोस् - तल हाम्रा ग्राहक समीक्षाहरू हेर्नुहोस्।
तपाईंको समीक्षा सबमिट गर्नुहोस्
यो साँच्चै अचम्मको छ! 100% प्रतिशत छिटो निःशुल्क र वैध! विश्वास गर्न सक्दिन मैले कति फलोअरहरू प्राप्त गरें धन्यवाद श्री इन्स्टा जाने ठाउँ हो यसलाई धेरै माया गर्नुहोस्! त्यो अचम्मको आवेदन छ! त्यो प्रयोग गर्न सजिलो छ र तपाईको इन्स्टाग्राममा फलोअरको लागि छिटो छिटो छिटो छ।
- जगद बि.
श्रीमान इन्स्टाले केही दिनमै मेरा फलोअरहरू बढाउन मद्दत गर्‍यो। सबैजना जो तुरुन्तै आफ्ना अनुयायीहरू बढाउन चाहन्छन् भने यो जाँचको लायक छ
- हाउलेट जे।
म उनीहरूसँग बढी सन्तुष्ट छु। व्यापार मा धेरै राम्रो। दुई रातमा मेरा फलोअरहरू 200 बाट 598 पुगे अनि गन्ती समय खेर नफाल।
तपाईंलाई कुनै पनि सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा पृष्ठ सुरु गर्न मद्दत चाहिन्छ भने जानको लागि अद्भुत साइट। र यसले अनुयायीहरूलाई निःशुल्क दिन्छ! अब तिनीहरूलाई समात्नुहोस्!
- क्रिस आर।
यो साँच्चै छिटो र प्रयोग गर्न सजिलो थियो। मैले तुरुन्तै नतिजाहरू देखेँ, अनुयायीहरूसँग मैले दस पृष्ठहरू पछ्याउने बित्तिकै, जुन तपाईंले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
- लुसी ई।
एक उत्कृष्ट साइट र, महत्त्वपूर्ण रूपमा, यो नि: शुल्क छ, तपाइँ यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत इन्स पृष्ठको लागि अनुकूलता बढाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एक पैसा पनि गुमाउनु बिना।
- काओ टी।
यो साइट अनुयायीहरू र मनपर्नेहरूको लागि उत्कृष्ट छ किनभने तपाईंले धेरै सामानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सबै चीजहरू वास्तवमा काम गर्दछ!
- रिचर्ड एम।
तिनीहरूले हामीलाई नि: शुल्क इन्स्टाग्राम फलोअरहरू दिन्छन् तिनीहरू 100 प्रतिशत वैध छन् म तिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु अब म सुपर लोकप्रिय छु
अद्भुत धेरै सहयोगी र महान यो प्रयोग !!!
यो धेरै राम्रो काम गर्दछ! 100% यो प्रयास गर्नुहोस् मसँग धेरै पटक किट अन्वेषण पृष्ठ छ मैले लाइकको कारण पोस्ट गरेपछि!
श्रीमान इन्स्टा उत्तम छ यदि तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम खाता बढाउन सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, यसले तपाईंलाई विश्वभरबाट गुणस्तरीय फलोअरहरू दिनेछ। मिस्टर इन्स्टाबाट प्राप्त अनुयायीहरूको लगातार संख्या भएपछि यो पहिलो चरण हो, तपाईंले नयाँ र अर्गानिक फलोअरहरूको नेतृत्व गर्ने आकर्षक प्रोफाइल पाउनुहुनेछ। सुरु गर्न उत्तम ठाउँ
- अलेजान्ड्रो डब्ल्यू।
फलोअर्स र लाइक प्राप्त गर्नुभयो धन्यवाद! Pls नरोक्नुहोस् र आशा छ कि म पनि थप प्राप्त गर्छु। यसलाई धेरै माया गर्नुहोस्
- जीन्स k।
नि:शुल्क इन्स्टा बृद्धि प्राप्त गर्नको लागि अद्भुत साइट त्यहाँ केहि छोटो आउँदछ जस्तै यसले धेरै समय लिन्छ तर अझै यो राम्रो प्लेटफर्म हो
यसले काम गर्छ! त्यसपछि तिनीहरूले धेरै नि: शुल्क लाइकहरू दिन्छन् कि तपाईंले कुनै पैसा तिर्नु अघि केही निर्माण सुरु गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
- लिकोर्ना डब्ल्यू।
नि: शुल्क अनुयायीहरू र सशुल्क सेवाहरू पनि कानूनी प्रस्ताव गर्दछ
मेरो लागि धेरै राम्रो छ तपाईले धेरै अनुयायीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ नि: शुल्क पनि यो धेरै उपयोगी र भरपर्दो छ म मात्र सिफारिस गर्न सक्छु
सबै भन्दा राम्रो आवेदन
यो साँच्चै उपयोगी छ र तपाईलाई वास्तविक इन्स्टाग्राम फलोअरहरू पाउँछु म तिनीहरूलाई5ताराहरूको लागि मूल्याङ्कन गर्छु किनभने तिनीहरूको अचम्मको कामको कारणले तपाईलाई चाहानु भएको बेला अनुयायीहरू राख्न अनुमति दिन्छ।
- राम्रो एम।
यस वेबसाइटले प्रतिज्ञा अनुसार डेलिभर गर्दछ। म थप अनुयायीहरू चाहनेहरूलाई सिफारिस गर्दछु। राम्रोसँग डिजाइन गरिएको इन्टरफेसले वेबसाइटमा तपाईले खोजिरहनु भएको कुरा फेला पार्न सजिलो बनाउँदछ!
- एन्डर्स ए।
यस्तो अद्भुत वेबसाइटको समीक्षा गर्न पाउँदा म अविश्वसनीय रूपमा खुसी छु, यहाँ तपाईंले नि:शुल्क लाइक र अनुयायीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र प्रिमियम सेवाहरू धेरै अविश्वसनीय छन्! तपाईंलाई यो मनपर्छ।
- डैनी आर।
अरूसँग मेरो खाता साझा गरेर र तिनीहरूलाई फलो गरेर तिनीहरू पनि बढ्न सकून् भनेर मलाई इन्स्टाग्राममा बढ्न मद्दत गर्दछ
- कोल ई।
वेबसाइटले मेरो सामाजिक मिडिया पृष्ठ सुरु गर्न मद्दत गर्यो। यो नि:शुल्क र झन्झटमुक्त थियो, र त्यहाँ कुनै सुरक्षा समस्याहरू थिएनन्, जसले यसलाई अझ राम्रो बनायो। म तपाइँको वेबसाइट मार्फत जाने प्रत्येक एकल नयाँ खाता पृष्ठहरू सिफारिस गर्न चाहन्छु।
- उषासी बि.
के तपाईं दैनिक, नि: शुल्क, उच्च गुण र लक्षित इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू चाहनुहुन्छ?
नि: शुल्क, उच्च गुण र लक्षित इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू प्राप्त गर्न को लागी इन्टरनेट को विश्वसनीय विश्वास प्रदायक इन्स्टाग्राम मार्केटिंग सेवाहरूको केहि क्लिकहरु को साथ। [ईमेल सुरक्षित] संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यान: 888 881-9070१-XNUMX०००
प्रतिलिपि अधिकार © २०२० मिस्टर इंस्टा (mrinsta.com)। सर्वाधिकार सुरक्षित। साइटमैप
तपाईंको कथा प्रश्नको जवाफ दिन थप मानिसहरू प्राप्त गर्न सुझावहरू